DroidCam: Sida loo isticmaalo kaamirada aaladda Android ee Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | 08/10/2021 06:00 | Android, Aplicaciones, GNU / Linux
Xaqiiqdii qaar badan baa mar uun doonayay inay u adeegsadaan sidii Kaamirada Webka (Webka) las Kaamirooyin isku dhafan ee uu Aaladaha mobilada iyo kuwa la qaadan karo con Nidaamyada Hawlgalka Android. Ama adiga oo aan lahayn Kaamiro Webka ku jirta Kombiyuutarrada Desktop -ka, ama adiga oo aan haysan kaameerad awood leh oo casri ah ama iyada oo waxyeello gaartay ama naafo ah.
In kastoo, hadda uu jiro ama aan la aqoon mid xal fudud, wax ku ool ah oo fudud si loo hirgeliyo taasi waa xor ah oo furan, waxaan isticmaali karnaa dhowr kuwaas oo ah bilaash ama freemium, sida kiiska dalabka bilaashka ah iyo isugeynta badan ee la yiraahdo "DroidCam".
Iyo sidii caadiga ahayd, ka hor intaanan si buuxda u gelin mowduuca maanta waxaan u tagi doonnaa kuwa danaynaya inay sahamiyaan qaar ka mid ah kuwii ugu dambeeyay qoraallo hore oo la xiriira con baaxadda nidaamka hawlgalka Android iyo codsiyadeeda ama wararkeeda, xiriiriyeyaasha soo socda iyaga. Si ay dhaqso u gujin karaan haddii loo baahdo, markay dhammeeyaan akhrinta daabacaadan:
"Un Server Multimedia waa wax aan ka badnayn aalad shabakad oo lagu keydiyo faylasha warbaahinada badan. Qalabkani wuxuu ka iman karaa server adag ama desktop fudud ama kombiyuutar laptop ah. Waxa kale oo ay noqon kartaa wadista NAS (Darawalada Kaydinta Shabakadda) ama aalad kale oo kaydinta ku habboon. Iyo MiniDLNA (oo hadda loo yaqaan ReadyMedia) waa software server-ka multimedia fudud ah, kaas oo ujeedadiisu tahay inuu si buuxda ula jaan-qaado macaamiisha DLNA / UPnP-AV ee hadda jira. Iyada oo leh MiniDLNA GNU / Linux waxaad awood u siin kartaa Adeegga Multimedia Fudud si aad u aragto waxyaabaha badan ee ku jira aaladaha Android." Multimedia Server: Ku abuur mid fudud GNU / Linux adoo adeegsanaya MiniDLNA
InviZible Pro: Barnaamij Android ah oo loogu talagalay Qarsoodiga iyo Amniga Qadka
Nooca beta ee seddexaad ee Android 12 horey ayaa loo sii daayay
1 DroidCam: U isticmaal taleefankaaga sidii kamarad webka
1.1 Waa maxay DroidCam?
1.3 Adeegso GNU / Linux
DroidCam: U isticmaal taleefankaaga sidii kamarad webka
Waa maxay DroidCam?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah de "DroidCam", codsigan waxaa si kooban loogu sharxay sida soo socota:
"DroidCam waa barnaamij u rogaya taleefankaaga / kiniinigaaga kaamerooyin kombiyuutar. Ku isticmaal barnaamijyada sheekaysiga sida Zoom, Kooxaha MS iyo Skype".
Halka, uu ku jiro degelka rasmiga ah ee Google Play Store waxa soo socda ayaa lagu daray:
"Codsigu wuxuu la shaqeeyaa macmiilka PC kaas oo kombiyuutarka ku xira telefoonka. Macaamiisha Windows iyo Linux ayaa diyaar ah. Booqo websaydhka horumariyayaasheeda adoo adeegsanaya kombiyuutarkaaga si aad u soo dejiso, u rakibto oo aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isticmaalkiisa".
Waxaa ka mid ah muuqaalada ugu fiican de "DroidCam" Waxaan sheegi karnaa waxyaabaha soo socda:
Waxay leedahay daabacaad lacag la'aan ah iyo adeegsi aan xad lahayn.
Waxay leedahay macaamiisha Linux iyo Windows, iyo Android iyo macruufka.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad adeegsato kamaradda aaladda mobilada / la qaadan karo iyada oo loo marayo isku xirka WiFi ama fiilada USB.
Waxay u oggolaaneysaa si fudud, aamin ah oo hufan sheekaysiga iyadoo la adeegsanayo "DroidCam Webcam" kombiyuutarkaaga, oo ay ku jiraan codka iyo muuqaalka.
Waxay taageertaa inay sii waddo adeegsiga aaladda moobiilka ee Android oo leh DroidCam oo gadaal ka shaqeyneysa.
Adeegso GNU / Linux
para soo dejiso, rakib oo u isticmaal "DroidCam" GNU / Linux nidaamka soo socda waa in la raaco:
Soo dejiso, rakib oo orod "DroidCam" qalabka Android / iOS ee loo baahan yahay oo xusuusnow Cinwaanka IP -ga iyo Dekedda tilmaamey arjiga, tusaale ahaan: «http://192.168.0.105:4747», «http://192.168.0.105:4747/video» o «https://192.168.0.105:4747».
Ku orod a Terminalka (Konsole) kuwan soo socda amar amar:
Dhex mara Liiska Codsiyada dalabka "DroidCam" oo ku muuji dhex -dhexaadnimadeeda garaafyada nooca isku -xirka (WiFi / LAN, Mode Server Server, USB Android iyo USB iOS). Hubi haddii fiidiyaha iyo codka la kartiiyay oo geli faylka Cinwaanka «IP: Port» oo uu macmiilku ku tusay aaladda Android / iOS ee la isticmaalay. Oo ku dhammee adigoo riixaya badhanka iskuxirka (Connect) si aad u bilowdo isla habsocodyada.
Fur Browser Internet, oo si toos ah u geli sanduuqa cinwaanka URL -ka sanduuqa Cinwaanka «IP: Port» o Cinwaanka «IP: Dekedda / Fiidiyowga» sharaxay. Waxa kale oo aad geli kartaa codsi shabakad sida wada sheekaysiga Telegram, WhatsApp, Facebook iyo kuwa kale si aad u isticmaasho kaamerada webka, illaa inta barowsarka uu ogaaday iyada oo aan wax dhibaato ah.
Nota: Qaar codsiyada desktop kuwaas oo adeegsada qabashada fiidiyaha url waxay sidoo kale awoodi doonaan inay qabsadaan qulqulka fiidiyaha ee ay wadaagaan "DroidCam" isaga ku saabsan Nidaamka Howlgalka GNU / Linux.
Soo koobid, "DroidCam" waa weyn oo fudud app lacag la'aan ah cross-madal, kaas oo lagu rakibay our Qalabka Android y Kombiyuutarrada leh GNU / Linux wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u isticmaasho kaamirooyinka ku dhex-jira kuwii hore. Marka waxaan rajeyneynaa inaad tijaabin doonto oo aad adeegsan doonto haddii ay dhacdo inay daboosho baahiyahaaga markaad isticmaaleyso kaamirooyinkaaga Aaladaha mobilada iyo kuwa la qaadan karo iyaga ku saabsan Kombiyuutarada Desktop -ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » DroidCam: Sida loo isticmaalo kamaradda aaladda Android ee Linux?
Barnaamijka Linux waa BAD !!
Ku jawaab Franco Castillo
Salaan, Franco. Waad ku mahadsan tahay faalladaada. Marka laga hadlayo macmiilka Linux ee Freezer, waxaan u malaynayaa in qaarkood ay noqon doonto mid aan macquul ahayn, mid kale oo waxtar leh, kuwa kalena xal weyn. Xaaladayda, imtixaanku si fiican buu iigu shaqeeyay sababtaas awgeed, waxaan u malaynayaa inay waxtar u yeelan karto dadka kale.
Marka la barbardhigo macmiilka Windows, waa masiibo. Rakibaadda, isticmaalka, dhaqdhaqaaqa, iwm.
Salaan, Franco. Waad ku mahadsan tahay faalladaada oo noo sheeg khibradaada app -ka kor ku xusan, si loo kobciyo waxyaabaha la daabacay.
Hi subax wanaagsan! Ma ku talin kartaa qaar ka mid ah barnaamijyada software-ka bilaashka ah iyo kuwa furan ee loo isticmaali karo SME, fadlan?
Waad ku mahadsan tahay horay u fiirsashadaada.
U jawaab Camila Patiño
Salaan, Camila. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga. Baadhitaan yar oo internetka ah waxaan helay liiskan, waxaan rajeynayaa inay noqon doonto mid faa'iido leh:
Nidaamka qorsheynta kheyraadka ganacsiga (ERP)
05. ERP5 Furan
07. Daabacaadda Bulshada ee Metasfresh ERP
11. Doolibarr ERP
Maamulka ku saleysan xiriirka macaamiisha (CRM)
15. Sonkor CRM
Goobta Iibka (POS)
Waxaa laga helay nuglaanta serverka Apache http